သွေးလှူသင့်တဲ့အကြောင်းအရင်း - TheeSayChin
April 12, 2019 Min Yar Zar	0 Comments
ကျန်းမာရေးဗဟုသုတသွေးလှူသင့်တဲ့အကြောင်းအရင်းPublished: April 11, 20192:30 pmUpdated: April 12, 201911:14 amAuthor Wun Lae9
အင်္ကျီလက်ကိုခေါက်တင်ပြီး သွေးလှူလိုက်ပါ။ အရမ်းပီတိဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်။ ရောဂါအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့် သွေးလိုအပ်နေသူတွေ၊ မတော်တဆမှုတစ်ခုခုကြောင့် သွေးလိုအပ်နေသူတွေကို ကိုယ့်သွေးနဲ့ အသက်ကယ်နိုင်တာက တော်တော်လေး ပီတိဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်။ သွေးလှူတာက သူများအသက်ကိုကယ်တင်နိုင်လို့ ပီတီဖြစ်ရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကုသိုလ်လည်းရသလို ကျန်းမာရေးအရလည်း ကောင်းကျိုးလေးတွေရနိုင်ပါသေးတယ်နော်။ ဘာတွေများဖြစ်မလဲလို့ စိတ်ဝင်စားနေပြီလား ဆက်ဆွေးနွေးလိုက်ရအောင်နော်။
သွေးလှူတာက ကျန်းမာစေနိုင်တယ်လို့ပြောရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
သွေးလှူတာကသူများအသက်ကိုကယ်ရာရောက်သလို ကိုယ်တိုင်မှာလည်း ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေတော်တော်လေးများပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရတော့ သွေးလှူတာကြောင့် အခုလိုမျိုးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေရရှိနိုင်တယ်၊လို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
သွေးပျစ်တာက နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်းပါ။ သွေးတွေကပျစ်လေလေ သွေးကြောတွေထဲမှာ စီးဆင်းရခက်လေလေဖြစ်ပြီး သွေးကြောနံရံတွေကဆဲလ်တွေကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်လေလေပါ။ သွေးတွေပျစ်နေတာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် အခြေခံအကျဆုံးသောနည်းလမ်းကတော့ သွေးလှူတာပါ။ ဒါတွေတင်မကပါဘူး။ သွေးလှူတာကြောင့် နှလုံးရောဂါခံစားရနိုင်ခြေနည်းသွားနိုင်သလို ရုတ်တရက်နှလုံးရပ်တာ နဲ့ လေဖြတ်တာတွေခံစားရနိုင်ခြေကို တော်တော်လေးနည်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။ သွေးလှူတာက ကိုယ်တွင်းက Oxidative Stress တွေကိုဖြေလျော့ပေးနိုင်ပါတယ်။
သွေးလှူလိုက်တဲ့အခါ သွေးတွင်းက iron oxidative stress တွေကိုလျော့ကျသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေက ခန္ဓာကိုယ်ကို အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်တာနဲ့ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို နှစ်ကြိမ်ပုံမှန်သွေးလှူပေးမယ်ဆိုရင် ကင်ဆာရောဂါကြောင့်သေဆုံးနိုင်ခြေကို သိသိသာသာလျှော့ချနိုင်မှာပါ။ သွေးလှူတာကြောင့် အသည်းကင်ဆာ၊ အဆုတ်ကင်ဆာ၊အူမကြီးကင်ဆာ နဲ့ လည်ချောင်းကင်ဆာတွေဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်မှာပါ။
သွေးလှူတာက ကိုယ်တွင်းကယ်လ်လိုရီတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်သွေးလှူတာက ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်သလို သွေးတွင်းသံဓာတ်ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ချဖို့စဉ်စားနေသူတွေအနေနဲ့ စမ်းကြည့်သင့်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါနော်။
သွေးလှူတဲ့အခါ အရင်ဆုံးလုပ်ရတာက ကိုယ့်သွေးထဲမှာရောဂါပိုးတွေရှိနေလားဆိုတာကို စစ်ဆေးရတာပါ။ HIV၊ အသည်းရောင်အသားဝါ နဲ့ အခြားသွေးကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေရှိလားဆိုတာကို စစ်ဆေးရတာပါ။ ဒီစစ်ဆေးမှုကိုအောင်မြင်မှ သွေးလှူခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး အကျိုးရှိတဲ့ စစ်ဆေးမှုတစ်ခုပါ။
သွေးလှူရင်း အခုပြောခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကို ရရှိနိုင်ကြပါစေကြောင်း…….
ရေးသားသူ – Aye Thi Mon ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ – Dr. Thurein Hlaing Win Post Views: 9သွေးလှူအကြောင်းအရင်
ဆောင်းတွင်းမှာ အနွေးဓာတ်ပေးမယ့် အော်ဂဲနစ် ဆေးနည်းကောင်းများ
ရန်ကုန်ဆောင်းက မပီပြင်ဘူး ဆိုပေမဲ့ နယ်ဘက်တွေမှာတော့ အချမ်းဓာတ်က သိသိသာသာ ပိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည် မြောက်ဖျားပိုင်း ဒေသခံတွေက ဆောင်းရဲ့ဒဏ်ကို ပိုပြီး ခံစားကြရပါတယ်။ အအေးဓာတ် ပိုကဲတဲ့ ဒေသမှာ နေထိုင်သူတွေနဲ့ အအေးဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်…
Published: February 6, 20198:58 amUpdated: 9:38 amAuthor Wun Lae337
ဘေဘီလေးတို့ သွားကျန်းမာရေးအတွက် လိုက်နာသင့်တာတွေ
ဖေဖေ မေမေတို့အနေနဲ့ ဘေဘီလေးတွေ သွားပေါက်ကာစ အရွယ်ကတည်းက သွားကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအရွယ်ကတည်းက ဂရုစိုက်ထားမှ ကလေးရဲ့သွားဖုံး နဲ့ ကြီးသွား တို့ကလည်း ကောင်းမွန်နိုင်မှာပါ။ Post Views: 38
Published: June 12, 20184:11 amAuthor ရိုးရာလေ3း8
အသောက်များသွားလို့ ခေါင်းမထူနိုင်တဲ့ ပြဿနာကို ပြေလည်စေနိုင်မယ့် အချက် (၆) ချက်
TGIF တွေ TGIS တွေမှာ သောက်ပြီးလို့ တနင်္ဂနွေဆို ပြဲကွဲနေပြီလား အဲလေ မထနိုင်ဖြစ်နေပြီလား?… သောက်တာလည်း မများဘဲ အရက်နာများ ကျနေကြပြီလား? တနင်္လာ အလုပ်သွားဖို့ရော ထနိုင်မှာ ကျိန်းသေရဲ့လား? မပူပါနဲ့… Post Views:…
Published: July 14, 20187:09 amAuthor ရိုးရာလေး47 ရိုးရာလေးတွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဆောင်းပါးများကို မည်သည့် Website နှင့် Social Media များပေါ်တွင်မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခွင့်မပြုကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဤနေရာတွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကနျြးမာရေးဗဟုသုတသှေးလှူသငျ့တဲ့အကွောငျးအရငျးPublished: April 11, 20192:30 pmUpdated: April 12, 201911:14 amAuthor Wun Lae9
ရေးသားသူ – Aye Thi Mon ဆေးပညာပိုငျးဆိုငျရာတညျးဖွတျသူ – Dr. Thurein Hlaing Win Post Views: 9သှေးလှူအကွောငျးအရငျ
ဖဖေေ မမေတေို့အနနေဲ့ ဘဘေီလေးတှေ သှားပေါကျကာစ အရှယျကတညျးက သှားကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျပေးဖို့ လိုပါတယျ။ ဒီအရှယျကတညျးက ဂရုစိုကျထားမှ ကလေးရဲ့သှားဖုံး နဲ့ ကွီးသှား တို့ကလညျး ကောငျးမှနျနိုငျမှာပါ။ Post Views: 38
Published: June 12, 20184:11 amAuthor ရိုးရာလေ3း8
အသောကျမြားသှားလို့ ခေါငျးမထူနိုငျတဲ့ ပွဿနာကို ပွလေညျစနေိုငျမယျ့ အခကျြ (၆) ခကျြ
TGIF တှေ TGIS တှမှော သောကျပွီးလို့ တနင်ျဂနှဆေို ပွဲကှဲနပွေီလား အဲလေ မထနိုငျဖွဈနပွေီလား?… သောကျတာလညျး မမြားဘဲ အရကျနာမြား ကနြကွေပွီလား? တနင်ျလာ အလုပျသှားဖို့ရော ထနိုငျမှာ ကြိနျးသရေဲ့လား? မပူပါနဲ့… Post Views:…
Published: July 14, 20187:09 amAuthor ရိုးရာလေး47 ရိုးရာလေးတှငျ ဖျောပွပါရှိသော ဆောငျးပါးမြားကို မညျသညျ့ Website နှငျ့ Social Media မြားပျေါတှငျမှ ပွနျလညျကူးယူဖျောပွခှငျ့မပွုကွောငျး အသိပေးအပျပါသညျ။ အသေးစိတျအခကျြအလကျမြားကို ဤနရောတှငျဖတျရှုနိုငျပါသညျ။
← သူမရဲ့ Sexy Fashion တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမီးလေးရဲ့ သဘောထားကို ပြောပြလာတဲ့ လုလုအောင်
စင်ကာပူလုံးဝ မဟုတ်ပါ. . . .သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာ ဖွင့်မယ့်. . .မန္တလေး..၆၆ လမ်းပလက်ဖောင်းပါ… →